အခြေခံကိုပြန်ဖွင့: ဤတွင် Start - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
"ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးသောအားနည်းချက်တက်ပေးကမ်းခြင်း၌တည်ရှိသည်။ အောင်မြင်ဆုံးအချို့သောလမ်းအချိန်ရုံတစျခုထက်ပိုကြိုးစားရန်အမြဲဖြစ်ပါသည်။ "
Reboot လုပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ဘ ၀ တွင် porn မပါဘဲမည်သို့သောပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။ YourBrainOnPorn.com တွင်“ ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်” မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းတို့ကိုရှာမတွေ့ပါ ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော သင်၏ reboot အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ။"အတုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ်ဇယ်များ၊ အသံနှင့်စာပေများကိုဆိုလိုသည်။ Facebook နှင့်ချိန်းတွေ့သည့်ဆိုက်များ၊ Craigslist၊ အတွင်းခံကြော်ငြာများ၊ YouTube ဗီဒီယိုများ၊ “ ထူးခြားသောစာပေများ” စသည်တို့ဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအစားထိုးခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
YBOP သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းသော ED နှင့်အခြားညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်အမျိုးသားများ၏အကြံဥာဏ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ် Pick နှင့်ရွေးချယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍“ ငါလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလုပ်နေတာလား” မပြောပါနဲ့။ သင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်လက်ရှိအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင်၏ reboot ၏အရှည်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ငါအကြံပြု ဗီဒီယိုများ၏ဤအုပ်စုသည် : ပါဝင်သည်ရာတှေရှိခဲ့တယျသူယောက်ျားတွေက
ကို restart ၏အခြေခံ (ဂါယူဆပါသည်)
Porn Myths: စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရား (Gabe Deem)
porn စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (နောဧသည်ဘုရားကျောင်း) ၏တစ်ဦးကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
သငျသညျကို restart နေတယ်ဆိုရင်သင်က porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသံသယကြောင့်, ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Porn & ED အပိုင်းအတူစတင် ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ - "Porn ကငါ့ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုစေခဲ့သလား စမ်းသပ်ကြည့်ပါ!” (Gabe Deem မှ)
သငျသညျ recover အဖြစ်သငျ့စိတျ၏နောက်ကျော၌ဤ Keep: အဘယ်ကြောင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသုံးပြုမှု (Bing နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေကြပြီး) တစ်ခုစွဲစွန့်စားမှုဖြစ်သနည်း
သင်တို့သည်ဤ3စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ED ပုံပြင်များအများစုအပါအဝင်အကောင့်ကို restart ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုတွေ့လိမ့်မည်: ပြန်ဖွင့် Accounts ကို: စာမျက်နှာ 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို: စာမျက်နှာ 2, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို: စာမျက်နှာ 3။ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များရှစ်စာမျက်နှာများ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
မြင် porn အမေးအဖြေများ နီးပါးမည်သည့်မေးခွန်းကိုအဖြေကိုသင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
မြင် ပြောင်းလဲခြင်းသည် Tools များ တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲကျော်လွှားအပေါ်အကြံပေးချက်များသည်။
စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ် အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် အရာအောင်မြင်သော reboot ခြင်းဖြင့်သီးနှံအကွံဉာဏျရေးသားချက်များ၏မုန့်ပါရှိသည်။
porn-သွေးဆောင် ED Reboot အကြံဉာဏ်ဗီလော့ဂ်: ဂါယူဆပါသည် - ၁၃ မိနစ်ကြာသောလူငယ်တစ် ဦး မှဗွီဒီယိုပြတ်တောက်သွားသော porn-induced ED မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။
ငါ၏ဗိုလ်ခြေအားဖြင့်ဒီ post ကိုဖတျရှုအကြံပြု YourBrainRebalanced.com - ပြန်ဖွင့်တွင်ငါ၏အကြံအစည်.
Porn စွဲ & လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ
“ ဒီလိုလုပ်တာကိုသင်လေ့လာတာအံ့သြစရာပဲ။ 'အသိပညာသည်စွမ်းအား' ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်ယခုအပြည့်အဝနားလည်ပြီဟုထင်ပါသည် တစ်ခုခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ အဲဒါကသင့်အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိပြီဆိုရင်သင်ဆန္ဒရှိရင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့စွမ်းအားကိုစုဆောင်းဖို့ပိုလွယ်ကူသွားတယ်။ ” - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
လူများသည်မတူညီသောလက္ခဏာများစွာနှင့်အတူဤကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိလာကြသည် သခြော သူတို့ရဲ့မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။ (ကြည့်ပါ အလွန်အကျွံ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာကဘာတွေလဲ?) ဥပမာ,
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပုံမှန်အားဖြင့်မိတ်ဖက် porn ထိုသို့တက်ရပေမယ့်မနိုင် (ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှိုးဆွခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောလေ့လာမှုများ)
ကြီးထွားလာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပင်အစွန်းရောက် porn နှင့်အတူ (porn အသုံးပြုမှုတင်းမာမှု (သည်းခံစိတ်) နဲ့ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံလေ့လာမှုများ)
မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နည်းနည်းစိတ်ကျေနပ်မှု (ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးမကျေနပ်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားလေ့လာခြင်း)
လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီသော morphing porn အရသာများ
လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်,
အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ဦးနှောက်မြူ (ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများဖြစ်သည်)
အကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲ ပိုပြီးအစွန်းရောက် porn မှတင်းမာမှုလျှော့ချ ဒါမှမဟုတ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ porn-သွေးဆောင် fetishes
ဒါဟာစွဲလမ်းသို့မဟုတ်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် ဦး နှောက်၏ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဓာတုဗေဒကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် ဆုလာဘ် circuitry ။ ရူပဗေဒဆိုင်ရာရှေးခေတ်စင်တာများသည်ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အမြင်များ၊ စိတ်ခံစားချက်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ၊ မောင်းနှင်မှုများ၊ တိုက်တွန်းခြင်းများ၊ သင်ယူခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့် libido နှင့်စိုက်ထူခြင်းတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့်အဓိကဟော်မုန်းအများစုကိုဆုချသောတိုက်နယ်အဆောက်အ ဦ များနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့အပြင်အားလုံးနီးပါးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများသည်ဤအဆောက်အ ဦး များနှင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများရှိမညီမျှမှုများမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ များစွာသောမတူကွဲပြားသောရောဂါလက္ခဏာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအအေးဒဏ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသည့်ဆုလိုင်းတစ်ခုမှပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လည်ပတ်မှုအတွက်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောပြောင်းလဲမှုများသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်ဖြစ်ပွားသော်လည်းအောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစား ၄ ခုသည်အဓိကပြောင်းလဲမှုများစွာပါဝင်သည်။
တစ်ဦးက numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (desensitization ) သင်တို့၏အကျိုး circuitry ၏
ထိခိုက်စွဲလမ်းကြောင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (ာင်း - အရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နောက်ကွယ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်)
သာမန်ဒဏ္debာရီတစ်ခုအားဖယ်ထုတ်ကြပါစို့။ ညစ်ညမ်းစေသည့်အခြေအနေများနှင့် rebooters များမှဖော်ပြသောကောင်းကျိုးများသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်လုံး ၀ မပတ်သက်ပါ။ (အော်ဂဇင်, abstinence နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမဆိုကွန်နက်ရှင်?).
တစ်ခုစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအခြေခံနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ဦးနှောက် overstimulation နေကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့အချိန်ထွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ် reverse နိုင်ပေမည်။ ပြန်ဖွင့် porn စွဲများနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေမှပြန်လည်ထူထောင်ဘို့ငါတို့သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အပါအဝင်။ မင်းတို့ ဦး နှောက်ကိုမူလစက်ရုံရဲ့စက်ရုံမှာပြန်ထားဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်။ ရှင်းနေသည်မှာသင်သည်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုရှင်းပစ်သည့်အခါသင်အချိန်ပြန်ယူပြီး restore point သို့ပြန်သွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်။ မရပါ။ သို့သော်သင် နိုင် သင်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကို ဦး တည်စေသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများစွာကိုကုသနိုင်သည်။ (ကြည့်ပါ ဦးနှောက်မှ porn စွဲအကြောင်းမရှိနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါသလား)
ပထမတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်က linear မဟုတ်ဘူး။ ဦး နှောက်တစ်ခုစီကကွဲပြားခြားနားတယ်။ အချို့လူများသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစွဲမက်မောမှုများနှင့် flatline ကာလ။ အချို့သည်ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးသောစိတ်နေသဘောထားများဖြစ်သည်။ တချို့ကျတော့ပြင်းထန်တယ် ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ။ အချို့ကအချိန်တိုအတွင်းသက်သာသည်ဟုခံစားရပြီး ပို၍ ခက်ခဲသောကာလသို့သွားကြသည်။ အချို့ကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ အချို့သည်ယေဘူယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းပါးသည်ဟုခံစားကြရသည်။ အခြားသူများကမူသူတို့၏လိင်အင်္ဂါသည်လပေါင်းများစွာကြာမှတကယ့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ရသည်အထိပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားသည်ကိုမသိရှိကြပါ။ အချိန်နှင့်တိုးတက်ရန်ပျက်ကွက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုသတိပြုပါ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ကျဝေဒနာ၊ စိုးရိမ်ခြင်းသို့မဟုတ် OCD ကဲ့သို့သောယခင်အခြေအနေကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင့် ဦး နှောက်ကိုအနားပေးပါ
reboot ဖို့အမြန်ဆုံးလမ်းမှသင့်ဦးနှောက်တစ်ကြွင်းသောအရာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ-porn, porn စိတ်ကူးယဉ်, ဘရောင်ဇာချိန်းတွေ့ apps ဒါမှမဟုတ် Craigslist နှင့် erotica ။ အချို့ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်မှယာယီအချိန်ပေးခြင်းသည်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ ယောက်ျားတော်တော်များများသည် reboot ကာလအတွင်းအော်ဂဇင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများရှိသောအမျိုးသားများကထိုသို့ပြုလေ့ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည်လိင်စိတ်ကိုထိတွေ့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးမကြည့်ပါကအကျိုးရှိနိုင်သည်။ တကယ်တော့တချို့ယောက်ျားတွေမှာပါ ၀ င်ပတ်သက်နေတယ် နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုသူတို့အစွန်းသို့မဟုတ် orgasming နီးကပ်လာရတဲ့ကိုရှောင်ကြဉ်သော။ ဒီလမ်းလျှောက် အဆိုပါ Chaser.
porn အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေများ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်သင်အဘယ်ကြောင့်အများဆုံးလူတို့သညျစဉျးစားမိစေခြင်းငှါ ယာယီ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကို rebooting ကာလအတွင်းဖယ်ရှားပါ။ အတိုတိုအဖြေကတော့ - ယောက်ျားတွေအများစုကဒါတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြproblemsနာများရှိသည့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသားများမှယာယီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ထားသည့်သမိုင်းရှိသည် လိင်စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ။ အချို့ကရက် ၉၀ ကိုအကြံပြုကြသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလိင်မဆက်ဆံရဟု ?? Terry Crews မှလိင်အစာရှောင်ခြင်းအပိုင်း ၁။ ပြီးတော့ rebooters တော်တော်များများကလည်းယာယီအချိန်ကုန်ကသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထမှုပုံစံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း YBOP တွင် reboot လုပ်ရန်“ rules” နှစ်ခုရှိသည်။
သင်ယာယီဖယ်ရှားပစ်သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်တစ် reboot စဉ်အတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်ကိုလျှော့ချဖို့အတှကျအထောကျအကူဖွစျနိုငျထင်ရှိလျှင်, ပေါ်ဤအကြောင်းချည်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ပညာပေးကျေးဇူးပြုပြီး masturbate မှဖြစ်စေမ, ပြီးနောက် masturbating ၏အကောင်းအဆိုး consတစ်ဦး မျှတတဲ့ချဉ်းကပ်မှု / အစီအစဉ်, ဤ တစ်ဦး nofapper နေဖြင့်ချည်မျှင် သူကိုအဘယ်သူမျှမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသိပ်တင်းကျပ်ဟုထင်၏။ ဒီဖြစ်ပွားနေသောချည်ရှိသူများအတွေ့အကြုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, “ No Arousal” နည်းလမ်း.
သငျသညျရှိပါက porn-သွေးဆောင် ED, သင့် ဦး နှောက်က“ ငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး” လို့ပြောနေတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းတာဟာမမှန်တာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် - မင်းဟာ porn စွဲလမ်းနေနိုင်တယ်၊ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အရာအားလုံးကိုမှအေးစက်။ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစိတ်တပိုင်းကိုစိုက်ထူရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိုအပ်ပါကသင်သည်ချိုလွန်းသည်သို့မဟုတ်“ လွှတ်ပေးရန်” မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အဆင်မပြေမှုမှသက်သာရာရရန်ယာယီမြင့်မားသောရှာဖွေမှုကိုသင်ရှာနေသည်။
အဆိုပါ အများစု ညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်ကျန်းမာလာသူအမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုလျှော့ချရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် - အနည်းဆုံးခဏတာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များမရရှိနိုင်ပါ။ PIED ပြင်းထန်သောအမျိုးသားများသည်၎င်းတို့၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ပြသရန်လိုအပ်လေ့ရှိသည်။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn အသုံးပြုခြင်းတို့သည်အတူတကွချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Pavlov ၏ခွေးကဲ့သို့ပင်ခေါင်းလောင်းသံကြားသည့်အခါတံတောင်ဆစ်ဖြစ်သည့်အခါသင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ porn အတွက် drooling စတင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းရောနှောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအားနည်းစေရန်အချိန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်ဆုံး၌ porn သို့မဟုတ် porn-related စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့သင်ယူခြင်းကသင်၏ porn နှိုးဆော်ခြင်းဝေး porn နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
Recovery ကိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်မပါဘဲပိုင်းတွင်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တစ်ဦးချွန်ထက်ကျဆင်းမှုကိုခံစားရယာယီညီမျှခြင်းကနေတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင် Remove နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူအများအပြားယောက်ျားတွေကျနော်တို့ flatline ခေါ်ဆိုပါ။ (ကြည့်ရှုပါ: "ကူညီပါ! ငါညစ်ပတ်ပေမဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ငါ့ရဲ့အစွမ်း၊ လိင်အင်္ဂါအရွယ်နဲ့လိင်စိတ်လျော့နည်းလာတယ်”)
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင် porn သုံးစွဲဖို့မတရားသောကိုပြန်လည်အသက်သွင်းစေနိုင်သည်။ အများဆုံးယောက်ျားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖျက်သိမ်းရေးတစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာအချိန်ရှိသည်သောသက်သေခံဖို့အံ့သြစရာဖြစ်ဘူးပြီ သူတို့ porn လုပ်ပေးထက်။ porn စွဲနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားတွေအဘို့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲရိုးရိုးကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းမတရားသောရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အံ့သြနေကြသည်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်, ကယ်ဆယ်ရေးဘို့မိမိတို့အဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေးမောင်းနှင်ခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသူသည်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါသို့မဟုတ် OCD သဘောထားတွေနဲ့အတူသူများသည်တိုးမြှင့်လက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ တောင်မှယာယီ abstinence သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အဓိကအချက်: ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်အကောင့်ကို restart posted တဲ့သူတွေမှလာ။ ပုံမှန်အော်ဂဇင်ဆက်လက်နေချိန်မှာအလွယ်တကူ recover သူအများအပြားယောက်ျားတွေရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
Key ကိုအမှတ် 2: ရှည်လျားတဲ့သေချာပေါက်ပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး, အခါသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှ abstinence ဖြည့်စွက်ထံသို့မရောက်ရ။ သင်ပြန်ဖွင့်အတွက်တိုးအဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်နဲ့အော်ဂဇင်၏ဆိုးကျိုးများစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မလုပ်မီမဆုံးဖြတ်မီအချို့အချက်များကိုစဥ်းစားရန်သတိပေးခြင်း: နောက်ဆုံးမှာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူတချို့ကယောက်ျားတွေ လိုအပ်ချက် အော်ဂဇင်မှ ခုန်-start သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာ reboot သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ပြီးနောက်နိုင်ရန်အတွက် flatline.
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ relapse မဟုတ်ပါ။ 'relapse' ဟူသောဝေါဟာရကိုသဘာဝဆုကျေးဇူးများတွင်အသုံးချခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် relapse ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းကို porn နှင့် porn အစားထိုးများအတွက်သာအသုံးပြုပါ။
ငါဒါကိုကြွေးကြော်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအနတ္တကိုဖိုရမ်တော်တော်များများမှာဖတ်ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပွဲတွေဖြစ်လာတယ်။ ဒီ site ရဲ့နာမည်က“ မင်းရဲ့ ဦး နှောက် porn.“ ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်၊
ပညာရေးကနေပြန်လည်နာလန်ထူသူကို 2) အမျိုးသားများသူတို့နေဖြင့်ပိုမိုလွယ်ကူအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလို့ပြော လည်း ယာယီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / အော်ဂဇင်ဖျက်သိမ်းရေး။ ယာယီ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသော ED မှသက်သာရာရစေရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အဖြစ် abstinence ထောက်ခံကြဘူး
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှားရာမရှိပေမယ့်, က All-န်းကျင်ကျန်းမာရေး panacea မကျမည်အကြောင်း မီဒီယာများကမွှမ်းတင်။ အားလုံးမဟုတ်လိင်တန်းတူနေသူများကဖန်တီးသောမဟုတ်သလိုတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (ကိုကြည့်ပါ, လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါသည်: ကွဲပြားခြားနားသောလိင်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 2010) ဖြည့်စွက်ကာ, သုတ်ရည်လွှတ်မျိုးစုံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို induces။ ၎င်းကိုစိုးရိမ်စရာမလိုသော်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားများကိုတာရှည်ခံခြင်းကမလိုလားအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဘ ၀ ၏အရာအများစုအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသင့်အတင့်သာရှိခြင်းသည်အဓိကဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့သောဇာတိလူမျိုးစုများတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ လိုက်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများ။
“ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမရပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ” သို့မဟုတ်“ ငါမှာမိန်းကလေး / ဇနီး / ပါတနာရှိသလား။ ”
porn ကိုစွန့်လွှတ်ဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်။ နောက်ဆုံးသင်လုပ်ချင်တာက“ စအို” ဖြစ်လာခြင်းဖြင့်သင်ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်မကြိုးစားပါ။ ဒီချည်ပေါ်စစ်ဆေးပါ အဆိုပါ orgasm Reboot: တစ်ဦးကချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ဦးအပေါ်, ဤချည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးခံရအစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ Thread နှစ်ခုလုံးမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာယောက်ျားများသည် rebooting သည်“ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့လျှင်သင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီ” ဟုအားလုံးသို့မဟုတ်လုံးဝမဟုတ်ဟုမိမိတို့ကိုယ်ကိုလှည့်စားသည်ဟုထင်မြင်သောကြောင့်၊ ဒီဟာကအနတ္တပါ။ ဒီမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံ:
မင်းသာရုန်းကန်နေရရင်၊ ငါက porn ကိုအရင်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ပထမတော့ nofap ရော pornfree နှစ်ခုလုံးလုပ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ pornn free တစ်ယောက်တည်းကြိုးစားကြည့်တယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတွန်းအားပေးခြင်းသည်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုကျန်းမာလာပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်အကြောင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးလုပျနိုငျလြှငျ, အဘို့အသွားပါ။ ဒါပေမဲ့ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာသင်ဆက်ပြီးရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုရင်ငါဒါကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ဒါဟာငါ့အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။
ဒီနေ့အင်တာနက် porn ကတော့ပြproblemနာပါ။ Porn use သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးသင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် ED ကိုဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သင်ကိုင်တွယ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်နိုင်သည် အကြောင်းမရှိမတရားသောနှင့်ပညာရေးပြန်လည်နာလန်ထူနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ တကယ်တော့, သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ထားပါသည်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ကြောင့်ဝါယာကြိုးများသင်ကဲ့သို့ကြီးလှ၏။ တချို့ကယောက်ျားတွေအကြံပြု အဘယ်သူမျှမသုတ်ရည်လွှတ်နဲ့အတူနူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုအခြားသူများသုတ်ရည်လွှတ်အတွက်ရောထွေးနေစဉ်။ သငျသညျ ED ရှိသည်နှင့်မှန်မှန်အော်ဂဇင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ယောက်ျားတွေအော်ဂဇင်ကနေကြားနေဘယ်မှာအကောင့်ကို restart လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးမိတ်ဖက် reboot နှင့်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်အောက်ပါအမေးအဖြေများကိုတွေ့မြင်:
ငါဘယ်လို Long က reboot သငျ့သလော
YBOP နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်အတော်များများကကျွန်ုပ်တို့ကရက် ၆၀၊ ရက် ၉၀ သို့မဟုတ် ၈ ပတ်စသည်တို့ကိုအကြံပြုသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရက်အရေအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသောကြောင့်အချိန်သည်သင်၏အခြေအနေ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်တွင်လုံးဝမူတည်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကတုံ့ပြန်သည် သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်။ တှငျတှေ့အချိန်ဘောင် ကို restart အကောင့်အသစ်များ၏ ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူတခြို့ porn-သွေးဆောင် ED သို့မဟုတ် DE ရှိသည်ကြောင့်ရပျလုံးကိုကျော်ဖြစ်ကြသည်။ : ပြောင်းပြန် porn-သွေးဆောင် ED reboot သူယောက်ျားတစ်ဦးဘာရိုမီတာ (မြင်သည်အတိုင်းသူတို့ရဲ့ erectile ကျန်းမာရေးကိုသုံးပါ ဘယ်လောက်ကြာက Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှထမြောက်ဖို့ယူကြမည်နည်း ).
ED မပါသောယောက်ျားများသည်အခြားသတ်မှတ်ချက်များကိုသုံးရမည်။ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။). ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများသည် rebooting အဆင့်ပြီးဆုံးသွားသောအခါတွင်တိုးတက်မှုများကြုံတွေ့ရသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။
လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများ၊ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု၊ ADHD၊ စိတ်ကျရောဂါစသည်တို့စသည်တို့ကိုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်းသည်သင်နှင့်အဘယ်သို့သောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စဉ်းစားပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်္ဘောကိုခုတ်မောင်း YourBrainRebalanced.com ကိုဖန်တီးသူကဒီခရီးကိုရောက်နေတဲ့ယောက်ျားတိုင်းဒီ post ကိုဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ reboot လုပ်ပါအဆိုပါထိပ်တန်း3အမှား
အကယ်၍ တစ်ခုကမင်းကိုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမျှဝေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာက“ ရက်ပေါင်းများစွာကိန်းပြည့်” ရရှိဖို့အတွေးအခေါ်နဲ့မဟုတ်ဘဲ၊ သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ porn အကြားအကွာအဝေးကိုခွဲခြားရန်အတွေးအခေါ်နဲ့ချဉ်းကပ်ပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နောက်ဘက်မြင်ကွင်းကိုပြတင်းပေါက်ထဲမှာတူသောအမှန်တကယ်ခံစားရသည်။
99% ဟာခွေးဖြစ်ပါတယ်။ 100% တစ်လေပြေဖြစ်ပါတယ်။ - YouTube
သတိထားရမည့်အချက်များ - ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါရှိသည့်လူငယ်အချို့သည်အင်တာနက် porn အစောပိုင်းတွင်မစတင်သောသက်ကြီးရွယ်အိုများထက် reboot လုပ်ရန်ပိုကြာသည်။ သို့သော်၊ ထိုလူငယ်များသည်နောက်ဆုံးတွင် reboot ပြန်လုပ်ပါကသူတို့၏လိင်စိတ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ - အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (Erectile အလုပ်မဖြစ်) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းခံရသည့်နံပါတ်တစ်မေးခွန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ ED ကိုပြုပြင်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း? တနည်းကား၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အစီအစဉ်မရှိပါ၊ ပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူများ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသာဖြစ်သည်။ သင်၏တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်မှာ porn မှချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်လျှင်၊ porn ကိုရပ်တန့်ရန်လုံလောက်နိုင်သည်။ သူကဆိုပါတယ်, များစွာသောယောက်ျားအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / အော်ဂဇင်ကိုခေတ္တဖယ်ရှားပေး (သင်အဖော်တစ် ဦး ရှိပါကအထက်ပါလင့်ခ်ကိုကြည့်ပါ) ။ တချို့ကလုပ်ရမယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖယ်ရှား အဖြစ်ကောင်းစွာ - အနည်းဆုံးခဏ။ ဒါကိုကြည့်ပါ video - Rebooting: Relapse ဆိုတာဘာလဲ။ - နော Church ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်.
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည် se နှုန်း။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကို (ရောင်စဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်) ကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် (sensitization မှတဆင့်) ။ ထိုကဲ့သို့သောကိုကင်းသို့မဟုတ်နီကိုတင်းကဲ့သို့သောစွဲသောအရာဝတ္ထုများသည်ဆုချီးမြှင့်သည့်စနစ် dopmaine ကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှလောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်သင်၏ဆုပေးစင်တာ (nucleus accumbens) သည် dopamine တုန့်ပြန်မှုတသမတ်တည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သည့်လကသင်၏ dopamine ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည့်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သင့်အားယနေ့အချိန်၌စကားပြောစရာမလိုတော့ပေ။ ယခုသင်သည်လိင်ပြောင်းလိင်စိတ်လိုအပ်နေသည်။ ဒီလောက်ထူးဆန်းတာကသင့် ဦး နှောက်ရဲ့မူလအစိတ်အပိုင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ (အဓိပ်ပါယျ) ဆိုတာမရှိဘူး။ သင်ကအာရုံခံစားမှုစွဲလမ်းလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေသလား၊ ဦး နှောက်၏စိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီးသားဖြစ်သော dopamine system ကိုသင်အလွန်အကျွံရင်ဖွင့်ခြင်းရှိမရှိအားလုံးပြေလည်သွားသည်။
“ အတည်ပြုလိုက်သော” သို့မဟုတ်“ ထပ်မံဖြစ်ခြင်း” (သို့) X, Y, သို့မဟုတ် Z) သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ reboot နှေးကွေးခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုဖြေ ဆို၍ မရပါ။ ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းကတော့“ ဘယ်လို ဦး နှောက်လေ့ကျင့်မှုမျိုးကငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာစွဲလမ်းမှုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေနိုင်သလဲ၊ ငါထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေတာလား” ဖြစ်တယ်။ သင်၏အခြေခံပြသနာမှာသင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအတုများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ပုံမှန်လိင်စိတ်တုန့်ပြန်မှုသို့ပြန်လိုလျှင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ဒီ concept ကိုနားလည်ရန်။
ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုလည်းကြည့်ပါ - ငါ reboot နေစဉ်အတွင်းအဘယျလှုံ့ဆော်မှုကိုငါရှောင်ကြဉ်ရမည် - ငါပြန်သွားခဲ့သလား
Porn: အမျိုးအစားအားလုံး။ သင်မေးရန်လိုအပ်ပါကအဖြေမှာ 'မကောင်းသောပြောင်းရွှေ့ခြင်း' ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုမဟုတ်ပါက၎င်းကိုမသုံးပါနှင့် (၎င်းတွင် cam contacts ပါ ၀ င်သည်) ။
တုကြောင့်အပြုအမူတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ သင့်ရဲ့ ညစ်ညမ်းဆေး ဘယ်များသောအားဖြင့်တကယ့်သဘောတူညီချက်အတွက်ဒြပ်နှင့်နှစ်ခုရှုထောင်အစားထိုးကြောင်းအပြုအမူတွေကိုဆိုလိုသည်။
အတုသို့မဟုတ်ဒြပ်နည်းလမ်းများဖယ်ရှားခြင်းသည်“ cam to cam” သို့မဟုတ် chat rooms များတွင်မပါဝင်ပါ။
ဓာတ်ပုံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Facebook အသုံးပြုခြင်း၊ ချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ YouTube၊ Craig's List သို့မဟုတ်အလားတူဆိုဒ်များသည်ဘီယာသောက်သောအရက်နှင့်တူသည်။
သင်ကသင့် ဦး နှောက်ရဲ့ Pavlovian အေးစက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုပြန်လည်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသလိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာဟာစောင့်ကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲ။
“ တကယ့်မိန်းမတွေအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတာလား။ ” အပြည့်အ ၀ ဆွေးနွေးမှုအတွက်ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုကြည့်ပါ။ အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးပြန်ဖွင့်နေစဉ်အတွင်းကူးယဉျကော?
“ ခေါ်ဆောင်သွားသော” ပုံပြင်များကိုဖတ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်မှုဖြစ်သည်။
အခုစာဖတ်သူအချို့က“ dopamine ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုငါရှောင်သင့်သလား” ဟုစဉ်းစားနေပေမည်။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ! အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပျော်ရွှင်မှု၊ အစားထိုးခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ စုံတွဲတစ်တွဲသည်နှေးနှေးသိမ်မွေ့စွာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးအော်ဂဇင်ကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Make ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း) ။ သုတေသနပြုချက်များအရဤလှုပ်ရှားမှုများသည်သင်၏ dopamine အဆင့်နှင့်စိတ်နေသဘောထားကိုထိန်းညှိပေးသည်ကိုပြသည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ တီဗွီများ၊ အစာမစားခြင်းနှင့်မတူသည်။
တချို့ကယောက်ျားတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ surfing နာရီနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအစားထိုး၎င်းတို့၏ပြန်ဖွင့်ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးကြစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? စင်စစ်ငါnternet စွဲတည်ရှိပါဘူး။ အဆိုပါခြားနားချက် oxytocin နှင့် opioids မှတဆင့်အကျိုးကို circuitry ၏ activation ပါဝင်ကြောင်းမသိမသာကွဲပြားခြားနားသော neurochemical သက်ရောက်မှုမှဆင်းလာပါတယ်။ သံသယရှိသင့်ဦးနှောက်ကိုလိုက်ရန်ပြောင်းလဲနှင့်မူသောသင်တို့ဘိုးဘေးတို့မှန်မှန်အတွက်စေ့စပ်လှုပ်ရှားမှုများ၏မျိုးများအတွက်တဲ့အခါမှာခုတ်မောင်း။
အဘယ်အရာကို "ခွင့်ပြုခဲ့" နှင့်အားပေးအားမြှောက်, တကယ့်ဘဝမိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပါတယ်
တကယ်တော့, အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်မှ rewiring အဖြစ်အချို့သောယောက်ျားတွေများအတွက်လိုအပ်သောခြေလှမ်း, ဖြစ်နိုင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်, စွဲမဟုတ်ဘဲ, အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နမ်းခြင်း၊ ထိခြင်း၊ အရူးလုပ်ခြင်းများအားလုံးကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ယောက်ျားအချို့အတွက်အော်ဂဇင်နှင့်ပင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပင်အကျိုးရှိသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှု ) ကိုစတင်အော်ဂဇင်မရှိဘဲ။ စိုက်ထူကြီးမြတ်ဖြစ်ကြပေမယ့်ရည်မှန်းချက်အစစ်အမှန်ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကးဖို့ rewire မှသည်အတိုင်း, ကျန်းမာသန်စွမ်းဆွသို့မဟုတ်ယဉျမှတဆင့်အတင်းအဓမ္မမရသင့်ပါတယ်။
ဆက်နွှယ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ် -“အကယ်၍ dopamine အလွန်အကျွံပြtheနာဖြစ်ပေါ်စေပါက dopamine ထုတ်လုပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်မဟုတ်လား။ဒီမေးခွန်းကသိပ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုသည် dopamine အချက်ပြမှုထက်နိမ့်ကျသည်။ ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိပဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဒါမှမဟုတ်သတိထားလူပျိုတို့အတွက်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များအတွက်ပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပုံရသည်။
စကားမစပ်, စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသောဆေးဝါးများ, ADD မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆန့်ကျင်ရေးဆေးဝါးများကဲ့သို့ဆေးညွှန်းများသောက်နေစဉ်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်သက်သာလာသည်။ အချို့သည်အိုးသို့မဟုတ်အရက်ကိုပုံမှန်သောက်သုံးနေစဉ်ပြန်လည်သက်သာလာကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ထပ်မံဖြစ်ပွားသောအရာများအကြောင်းအစီရင်ခံပုံရသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးမှာအလွန်ခက်ခဲသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပညာ၏ပြင်းထန်သော“ ပြင်ဆင်မှု” ကိုမှီခိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပြinternetနာကိုအင်တာနက် porn ၏ကာလတိုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောအာရုံခံဆက်သွယ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အိမ်တစ်အိမ်တည်းနေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်းစသည်တို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဤမသိစိတ်တစ်ပိုင်းချိတ်ဆက်မှုကိုအားနည်းစေသောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းကို (အားဖြည့်ခြင်း) ကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆေးဝါးတခြားနေရာကိုရှာခြင်း။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် porn နှင့် porn fantasy နှင့်အာရုံခံဆက်သွယ်မှုအားနည်းလာသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒ & rewiring, "နှင့်သင်များစွာသောရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဤနေရာတွင် tools များ ကြောင်းနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်စဉ်ကဤလမ်းဖော်ပြထား:
ဦး နှောက်မှအပျော်အပါးရင်းမြစ်တစ်ခုကိုသင်ဖယ်ရှားသောအခါ၎င်းသည်စားပွဲ၏ခြေထောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တူသည်။ ဒီတစ်ခုလုံးကကျောက်တုံးကြီးတွေ၊ မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ ဦး နှောက်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာသင့်အားငရဲကဲ့သို့သောစိတ်ကိုထိခိုက်စေရန်သင့်အားစားပွဲခြေထောက်ပြန်ထားရန် 'အားပေး' ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ အဲဒါကိုမပါဘဲပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာဖို့ဘယ်လိုထွက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမတစ်ခုကကြိုးစားတယ်။ ထို့နောက်ခဏကြာသော် Option XNUMX ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးထိုအချိန်အတောအတွင်း Option One ကိုတွန်းအားပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း၊ Option One ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် Option XNUMX တွင်အပြည့်အဝအောင်မြင်ခြင်းရပုံရသည်။ ”
အဟောင်းကိုလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ရပ်မသာပြန်ဖွင့်ပါကလည်းကူညီပေးသည် ပုံမှန် sensitivity ကိုရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်လာ။ ကိုသတိရပါ: Numbed ဦးနှောက်ဆွဘို့အအပူတပြင်းဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အခမဲ့အလိုတော်ပုံမှန်ဦးနှောက် sensitivity ကို restore ပြန်တည်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကောင်လေး said:
ငါထင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကအကူအညီဖြစ်စေတယ် - reboot လုပ်ပြီးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မကျေနပ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်းများခံစားရလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်“ အလုပ်လုပ်သည်” ဆိုလျှင်သံသယဝင်လာနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကအစာကျွေးချင်နေတယ်။ မင်းကိုမကောင်းဘူးလို့ခံစားရပြီးဆက်လုပ်နေမှာပါ။ မိမိကိုယ်ကိုသာဤသို့ဆက်ပြောပါ -“ ဒီအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိငါလုပ်မယ်၊ ပြီးရင်ငါမြင်လိမ့်မယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ဒါကအလုပ်မလုပ်ဆိုတာသေချာတယ်။ နောက်မှပြန်လာချင်ရင်ငါ့ဘ ၀ ရဲ့သုံးလကငါ့ကိုမသတ်ဘူး” တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်ကိုယူပြီးအခြားပစ္စည်းများကိုလုပ်ပါ။ ခုခံရန်ခက်ခဲပြီးယခုအချိန်တွင်တစ်ခုခုလုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကားအဘယ်နည်းကိုကြည့်ပါ၊ ကြိုတင်စီစဉ်ပါ။
သင်ဟာစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်။ ဒါကအာဏာစွမ်းအားနဲ့မပတ်သက်ဘူး။ ဒါကိုလုပ်ဖို့သင့်တော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့သင်တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းလုပ်ချင်တဲ့အရာ၊ အနည်းဆုံးဘာမှမလုပ်ဘဲ၊ သင့်ကောင်မလေးအတွက်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ ၂ လခန့်ကြာပြီးနောက်တွင်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး ၃ ရက်အကြာတွင်တိုက်တွန်းချက်များသည်အလွယ်တကူပိတ်ဆို့။ ရနိုင်သည့်အတွေးများ မှလွဲ၍ အခြားအရာများမဟုတ်ပါ။ သင်ချိုးဖောက်ခဲ့သောအလေ့အထများနှင့် ပို၍ မတူအောင်မေ့ရန်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအငြင်းပွားစရာမရှိတော့ပါ။ မလိုအပ်တော့ပါ၊ တမ်းတနေစရာမလိုတော့ပါ။ ငါ့အဘို့ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှအကြာတွင်ပင်သင်သည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုခံစားရနိုင်သော်လည်းသူတို့ကိုသင့်အားမလှည့်စားပါစေနှင့်။ မင်းစွဲနေတယ် ဒါကြောင့်မင်းကနောက်တစ်ခွက်ထပ်မသောက်နိုင်တော့ဘူး၊ သင်ကိုယ်တိုင်ထိုအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းသင်သိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိယုံကြည်စိတ်ချပါနှင့်သင်၎င်းအတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ reboot လုပ်တာကပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းပဲ၊ အမြဲတမ်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသတာမဟုတ်ဘူး။ လူ့ ဦး နှောက်သည်အခြားသူများထက် ပို၍ အားနည်းချက်ရှိသည်။ သင်ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်၊ သင့် ဦး နှောက်ဟာအမြဲတမ်းအားနည်းချက်အချို့ရှိနိုင်ပါတယ် supernormal ဆွထိုကဲ့သို့သောယနေ့အင်တာနက် porn အဖြစ်။ မည်သည့်ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုမဆိုအလွန်အကျွံနှိမ့်ချနေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင့် ဦး နှောက်တွင်အားကောင်းသောပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောလမ်းစဉ်ရှိပြီးယခုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ Rebooting ကအနာဂတ်မှာအင်တာနက် porn ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသုံးနိုင်မယ်လို့အာမမခံပါဘူး။ ထို့အပြင်လိင်သည်အဓိကအခြေခံကျသောလူ့မောင်းနှင်မှုဖြစ်သည်။ ဒီတော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကလိင်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကိုခုန်ကျော်ဖို့နဲ့ဂိမ်းကစားဖို့ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေမသုံးဖို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ဒါကအနာဂတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုပြuseနာဖြစ်စေတဲ့နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။
တစ်လလောက်ကြာတော့ (ငါအခုဘယ်မှာလဲ) ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ ငါဒီမှာပထမ ဦး ဆုံးစေ့စေ့စပ်စပ်ဖတ်ပြီး / ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ နောက် ၂ ပတ်လောက်နေပြီးဗဟုသုတတွေစုဆောင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ (ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်း) ကိုရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ rebooting ကိုဘယ်လိုသွားသွားမလဲဆိုတာကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းမှကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုလည်းလျှောက်ထားသည်။ 'စလစ်' သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လုံးလုံးလန်းလန်းပြန်ထွက်နိုင်သည်ကိုအာမခံသည်။ Dudes တော်တော်များများက YBOP ကိုထိမိလဲပြီးနောက်တစ်နေ့ PMO ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသိပ်မလုပ်တော့ဘဲနုတ်ထွက်သွားရင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်ရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုမတွေ့ရဘူးလား။
သင် reboot လုပ်ပြီးတာနဲ့ porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အမှန်တကယ်အလားအလာမိတ်ဖက်များနှင့်လက်တွေ့အခြေအနေတွေအပေါ်အခြေခံပြီး, လျော့နည်းပြဿနာ (နှင့် ပို. ပို. ပျော်စရာ) ဖြစ်ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်လာရန်စတင်နှင့်သင် desensitization လက္ခဏာသတိထားမိလျှင်, သင်အမြဲနောက်တဖန် reboot နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင် ပို. ပင်ကမ်းလှမ်း ပွော့ကျေနပ်မှု.
Recovery ကိုက Non-Linear (ဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်) ဖြစ်ပါသည်
“ တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးမအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မင်းကိုစိတ်ပျက်စေမယ့်တာရှည်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိရမယ်။ ” - ချားလ်စ် C. Noble
သင်ပြန်ဖွင့်စတင်လာတဲ့အခါသင် may ပုပ်ခံစားရတယ်... ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်။ အမျိုးမျိုးသောအရာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းသည်သင်တို့၏ပြင်းထန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝိရောဓိဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် libido "flatline" နိုင် ခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်လာသောမတိုင်မီလအနည်းငယ်အကြာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန် porn ဖြင့်“ စမ်းသပ်ခြင်း” သည် reboot လုပ်ရန်လိုအပ်သောအချိန်ကိုတိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည့်အရာအားသင်မည်သို့သိသည်ကိုမသိရန် The Void ကိုရဲရင့်ရမည်။ သူတို့ကိုသုံးပါလျှင်သူကပြောပါတယ်, လူတွေအများအားဖြင့်ရက်သတ္တပတ်-အထူးသဖြင့်၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်လည်းကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တို့ကိုတွေ့ကြုံစတင်ရန် အခြားအ Tools များ အသစ်သောနည်းလမ်းတွေထဲမှာအကောင်းခံစားချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ရန်။
သို့သော်တိုးတက်မှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ၊ ကောင်းသောနေ့များကိုစိတ်ဆင်းရဲဖွယ်နေ့များနှင့်လိုက်နိုင်သည်။ ဆိုးဝါးသောနေ့များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနေ့များရှေ့တွင်လည်းရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိချိန်သီးတစ်လုံးရှိသကဲ့သို့နီးပါးပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုတစ်ခုသည်အစွန်းရောက်တစ်ခုတွင်ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ သင်အင်တာနက် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါ၊ အာရုံကြောဓာတုအတက်အကျသည်သင်၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်သင်၏ဘ ၀ အပေါ်သင်၏အမြင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်ဤဖြစ်စဉ်သည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်။ သူတို့ကသင်၏အကောင်းမြင်မှု၊ အခြားသူများနှင့်ပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းနှင့်သင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုလည်းပင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
“ အငယ်တန်းမြင့်တက်တုန်းကကျွန်မမိသားစုမှာဆူညံလှတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကညစ်ညမ်းတဲ့မဂ္ဂဇင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါတစ်ခုခုရိုက်ယူခဲ့သည်ထင် ငါကြိုးစားနေတော့ဘူး၊ ငါဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုနောက်အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးငါ့ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ အခုတော့ငါအငယ်တန်းမြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရပြီလိုခံစားရတယ် ငါစွန့်ခွာသွားသည့်နေရာကိုကောက်ယူရင်းနောက်ဆုံးတွင်မည်သူဖြစ်လာမည်နည်းဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ စည်းကမ်းရှိသည့်၊ ကြင်နာသော၊ အသိဉာဏ်ရှိသူ၊ လေးစားမှုရှိသူ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ခိုင်မာသော၊ ဂရုစိုက်တတ်သောလူကြီးလူကောင်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းစရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လည်းတင်းကျပ်ရဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ် Make "ဇွဲမပြည့်စုံပါ။ " သင်ကိုယ်တိုင်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါ။ Reboot လုပ်တာကရယ်စရာကောင်းတယ်။ ယင်းကိုအရှိဆုံးချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်ဟာသဉာဏ်ကိုစောင့်ရှောက်။ သူတို့၏လူသားနှင့်လက်ထပ်မှုကိုလက်ခံကြသည်။ သူတို့သည်သူတို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီးတဖြည်းဖြည်းလူသစ်တစုထဲသို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ bludgeon, ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုခြိမ်းခြောက်ကြပါဘူး။ လိင်သည်အလွန်တွန်းအားဖြစ်သည်။ ဒီအပြောင်းအလဲကိုဖြတ်ပြီးမင်းရဲ့လမ်းကိုဖြေလျှော့ဖို့၊ မင်းချော်ရင်မင်းကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အကောင်းဆုံး။
အောက်ခြေလိုင်း: ပြန်ဖွင့်ကြီးမားတဲ့ကတိကဝတ်များနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်သနည်း ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီသူမြား၏ပုံပြင်များကိုဖတ်ပါ: Accounts ကိုပြန်ဖွင့်။
အားဖြင့် reddit / nofap ကနေနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ပို့စ်, saxoman1
အဲ့ဒီ nofap ဟာသူတို့ကိုမကူညီဘူး၊
အဘယ်သူမျှမ, nofap မဟုတ် PMO။ သင် PMO'ing နှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ကြပြီ။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာတစ်နာရီ (များစွာသော) နာရီထိုင်။ သင့် ဦး နှောက်ကို dopamine, deltafos-B နှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆေးကြောခြင်းဖြင့်ရေချိုးခြင်း။ ဘယ်လိုလဲ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို (အမြင့်) ကိုထိန်းသိမ်းရန်နာရီနှင့်နာရီပေါင်းများစွာအော်ဂဇင်၏အစွန်းတွင်ရှိနေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
သင်တို့အများစုအတွက်သာမန်ပစ္စည်းတွေကမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့သင်ဟာပိုပိုပြီးအစွန်းရောက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင်ကပို။ ပို။ porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဗွီဒီယို / ရုပ်ပုံကိုရှာဖွေခြင်း။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့် ဦး နှောက်သည်သင့်အားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသင်ဆက်ပြောသည်။ သို့သျောလညျးသငျပွုအားလုံးသည်သင်၏မျက်နှာပြင် fertilize ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်အရှိဆုံးပျော့များမှာအခါသင်၏အတော်များများကသင်၏ဖောင်နှစ်ပေါင်း (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်) ၌ဤအမှုကိုပြု၏။ ဒီဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးရင်တောင် PMO ၏နှစ်ပေါင်းသင့်ဦးနှောက် rewired ပါပြီ။ ယခုသင်တို့စွဲဖြစ်ကြသည် PMO ဘို့ကြိုးနက်ရှိုင်းသောအာရုံကြော ruts ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါပြီ။
အကယ်၍ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဤသို့ (သို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာများကို) ပြုလုပ်နေပါက၊ သင့်ကိုကုသရန်ရက် ၃၀ - ရက်ပေါင်း ၅၀ (သာမန်အားဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြတင်းပေါက်) မျှသာဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်မည်သို့မျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။
ဒါပေမဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာမင်းက“ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ငါနေဆဲ PIED, ED, ဒါမှမဟုတ်အဘယ်သူမျှမ sensitivity ကိုရှိသည်။ ငါကပြားနေတယ်။ ငါမှာကောင်မလေး / ရည်းစားမရှိသေးဘူး။ ”
တဆိတ်လောက်! ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သည်ယခုအချိန်တွင်အတော်များများပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင် PMO'ing လုပ်ခဲ့သည့်အချိန်ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤနည်းကိုသင်ကြည့်သောအခါရယ်စရာမဟုတ်ပေလော။ သင်သည်သင်၏စနစ်အား၎င်းအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာရေချိုးကန်မှအနားယူနေပြီး၎င်းသည်“ ပြန်လည်စတင်” သို့မဟုတ်“ reboot” ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒီတော့တက်ခေါက်! သင်ကုရန်အချိန်လိုအပ်သည်။ ဒီ post ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအရာတို့ကိုရှုထောင့်သို့တင်ရန်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများသည်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကုသနိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအခြား fapstronauts / femstronauts နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမပြုပါနှင့်!
သငျသညျအားနည်းချက် / စိတ်ပျက်ခံစားရအခါတိုင်းဒီတော့ဒီ post ကို၏ဆောင်ပုဒ်အတည်ပြု:
“ နှစ်တွေအတွက် PMO'ing လုပ်တာပါ၊ ဒါကြောင့် _________ [အချိန်ယူနစ်ထည့်သွင်းခြင်း] ကငါ့ ဦး နှောက်ကိုကုသပေးတာကိုမမျှော်လင့်ပါဘူး။ ငါဆက်လုပ်မယ် ငါသည်းခံမည်။ ”
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ rebooting အကြောင်းဖော်ပြချက်
ဆေးခြောက်သုတေသနအပေါ်အပိုဒ်ပြန်လည်စတင်မှုများ Concept ကိုဥပမာ